Tetik'asa fanokafana tazo-totozy ho an'ny lehilahy sy vehivavy - tetikasam-bolo-kanto
Totozy ny lamaody fanadinan'ny lamaody ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy
sonitattoo Jolay 1, 2016
Ny hatsarana amin'ny tatoazy lolo dia tsy azo ovaina loatra. Ny lolo no tian'ny olona rehetra mankasitraka ny natiora. Ny ankamaroan'ny vehivavy dia mahita izay manana lolo amin'ny vatany toy ny tatoazy. Ny endrika sy ny lokon'ny lolo no mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny asa zavakanto. Tsy dia misy loatra ny vatan'ny lolo izay tsy mety tsara ny lolo.
Efa nandalo fahasahiranana na olana teo amin'ny fiainana ve ianao ary nahazo azy ireo? Ny fampiasana lolo toy ny tatoazy dia afaka manampy anao hahatsiaro.
Tattoo butterfly dia midika
Miresaka momba ny fahasamihafana ara-panahy sy fitiavana ny Butterfly. Izany dia afaka maneho ny psyche sy ny fitiavana, ny faniriana ary ny fitiavany. Ny #butterfly dia tena tsara tarehy sy marevaka, izay ny ankamaroan'ny vehivavy dia maniry ny hampiditra azy ao amin'ny vatany. Ny mahazendana sy ny avonavona dia mampisongadina azy rehefa mameno azy io dia mahagaga. Ny asan'ny mpandraharaha iray no manapa-kevitra hoe aiza no hametrahana ny #tattoo.
Tena tiana sy mahavariana ny tatoazy lolo. Malaza amin'ny fiovan'ny lolo ny lolo iray alohan'ny ahafahany miverina tsara. Vokatr'izany dia misy lanjany maro mifandray amin'ny lolo toy ny fitsanganana amin'ny maty sy ny fahaterahana indray. Ny kristiana dia maka ny lolo tsy misy fitsanganana amin'ny maty avy amin'i Jesoa Kristy sy ny asany ho any an-danitra.
Ny tontolon'ny lolo dia midika hoe fitiavana, fitsanganana amin'ny maty ary fahaterahana indray, ara-panahy ary fanahy, fanovàna, ara-panahy ary fanahy, fahasoavana sy fahamoram-panahy. Misy tatoazy vitsivitsy izay mahatonga anao te-hijanona sy hangataka ny dikany. Ny iray amin'ireny tatoazy ireny dia ny tatoazy vita amin'ny lolo izay misy karazany sy karazany. Ireo Tattoos Lelan'ny Keltika koa dia tandindon'ny ara-panahy sy ny fanompoan-tsampy. Misy ny tatoah-java-totozy momba ny lolo izay miresaka ary maneho koa ny Fanantenana sy ny Fiterahana ho an'ireo izay tafavoaka velona.
1. Volo fotsy sy lolo Tato ho an'ny tato ho an'ny zazavavy
Ny tantara mampientanentana indrindra dia lazaina amin'ny fananganana lolo. Ireo vehivavy izay tsy maty voan'ny kanseran'ny nono dia hita amin'izao fotoana izao, mampiasa lolo mba handrakotra ny marary amin'ny faritra voakasika. loharanon-tsary
2. Piramida sy lolo raki-bolana ho an'ny zazavavy
Ny haben'ny loloinganao dia miankina amin'ny toerana tianao hialana amin'ny vatanao. Na izany aza, raha mieritreritra zavatra lehibe kokoa ianao, ny feny, ny tsinay na ny aoriana dia mety ho toerana tsara ho an'izany. loharanon-tsary
3. Tolo-tavy miloko manga ho an'ny vehivavy any ambadika
Ilay artista dia hanampy anao hiaraka amin'ny dingan'ny fisafidianana ny tato-bono lolo marina ho anao raha mbola tsy manapa-kevitra ianao. loharanon-tsary
4. Tapa-totozy totozy tattoo fanoratana sary hosodoko ho an'ny vehivavy
Ny alahelo, ny traikefa mampalahelo sy ny fanaintainana dia azo faritana amin'ny lolo izay fantatra amin'ny maha-zavakanto tsara tarehy. Vehivavy miezaka mampiseho ny lafiny maha-feminista anao ve ianao? loharanon-tsary
5. Toro-làlana tsotra ho an'ny tatoazy ho an'ny vehivavy
Raha zatovo tia lolo ianao, dia afaka manamboatra azy ireo ho masculine kely izy ireo raha tsy manary ny hatsarana izay miaraka amin'ny lolo voajanahary. loharanon-tsary
6. Tapa-tady tsara tarehy tattoo fanoratana hevitra
Mandehana ho an'ny tontolon'ny lolo. Mety ho lehilahy tia ny natiora ianao ary manana marary hanafina; Ny lolo no mety ho safidy tsara indrindra ho anao. loharanon-tsary
7. manodidina sy lolo tatoazy ho an'ny zazavavy any aoriana
Azonao atao ny manome fahafinaretana amin'ny tatoazy loloinao amin'ny famoronana azy ireo voninkazo na zavatra hafa izay mahaliana anao. loharanon-tsary
8. Music fanamarihana sy lolo mamerina tato ho an'ny ankizivavy miaraka amin'ny hafatra; mino
Amin'ny fiafaran'ny andro dia faly ianao fa nahazo ireo zavaboary tia mitsikitsiky ny vatanao. Azonao atao ny manintona lolo maro araka izay irinao, na dia amin'ny teny mahafinaritra voasoratra eo aminy aza. loharanon-tsary
9. Tetikasa tatoazy mahagaga mahatalanjona ho an'ny olona mamitaka
Ny elatry ny lolo dia maivana sy malefaka. Ireo elatra ireo dia fantatra fa maneho fitiavana sy hatsaram-panahy rehefa avy oram-baratra; kanefa mampiseho hery handresena fanamby. loharanon-tsary
10. Tapa-tavoahangy ravina akavin'ny tavy sy lolo
Misy karazana lolo samy hafa azonao atao ny misafidy raha toa ianao ka vonona amin'ny tatoazy mahatalanjona. loharanon-tsary
11. Small vavony Lolo vavy tato ho an'ny vehivavy
Totozy marevaka tsara tarehy dia afaka mamorona ny saina amin'ny sasantsasany amin'ny faritra saro-pantarina amin'ny vatanao. loharanon-tsary
12. Blaogin'ny lolo manga amin'ny loko manga ao an-damosina
Miezaha hifandray amin'ireo singa natoraly amin'ny tatoazy mahafinaritra. Afaka mandao ny tatoazy amin'ny faritra rehetra ao amin'ny vatana ianao ary mbola hahagaga ny zavakanto. loharanon-tsary
elefanta tatoazytanana tatoazykoi fish tattootatoazy lolotatoazy ho an'ny zazavavytato ho an'ny vatofantsikaarrow tattooanjely tattoostattoos armtattoos rahavavyscorpion tattootattoos footnamana tattoos tsara indrindratattoos mahafatifatytattoo watercolorcat tattoostattoos voronatattoos backAnkle Tattooseagle tattooslion tattoostattoo ideashenna tattooraozy tatoazytattoos crossdiamondra tattoocompass tattoomasoandro tatoazyloto voninkazotattoo infinitymoon tattoosTattoo Feathertattoo cherry blossomtattoostattoos sleeveNy zodiaka dia mampiseho tatoazymozika tatoazyTatoazy ara-jeometrikamehndi designHeart Tattoostattoos mpivadytattoo octopustattoos ho an'ny lehilahytatoazy fokotratra tatoazyfitiavana tatoazyrip tattoostattoo eyetattoostatoazy voninkazo